Splice, yepamberi vhidhiyo mupepeti pamutengo wakanakisa | IPhone nhau
Splice, yepamberi vhidhiyo mupepeti pamutengo wakanakisa
Svondo rapfuura isu takapindura Sarudzo yeGoPro yehungwaru naQuik, uye sezvo isu tiri pano, zvinoita sekuronga kwakanaka kutora tarisa Splice, imwe yacho vhidhiyo yekushandura application iyo GoPro yakawana imwe nguva yapfuura uye kuti ikozvino ine rutsigiro rwemari nehunyanzvi hwekambani inotungamirwa naNick Woodman.
1 Kuita zvimwe
2 Yakatakura zvakanaka
Ipo Quik yaive yakanangana nekugadzira inokurumidza template-yakavakirwa mavhidhiyo, Splice inotsvaga kuve yakananga kukwikwidza kune iMovie pasina chero kusagadzikana. Ndokusaka isu takatarisana nevhidhiyo mupepeti kufambira mberi chaizvo nesarudzo dzakawanda kuti tikwanise kupedza maawa nemaawa tichigadzirisa zvisikwa zvedu kusvikira tawana mhedzisiro yemhando yepamusoro.
Chimwe chezvinhu zvinonyanya kufadza nezve Splice ndechekuti nguva dzese zvinoshandiswa nekutsvaga ita kuti kugadzirisa kuve nyore, chimwe chinhu chakanyanya kunetsa kuzadzikisa kana tiine sarudzo dzakawanda. Inoita izvi kuburikidza nekubudirira mushandisi mushandisi (ine matema uye bhuruu matoni mune yakachena GoPro maitiro) mune iko nyore kushandiswa kunogara kuchikosheswa.
Imwe yehunhu hwaSplice ndeyekuti inopa yakawanda serial zvemukati kutibatsira nemavhidhiyo. Chikamu chezwi chinokodzera kutaurwa kwakasarudzika, kwatinowana raibhurari yakakura yeaudio uye nemhere mhere yatingaise kumavhidhiyo muhuwandu hwatinoda, nekuti inouya nerutsigiro rwemultitrack seyakajairwa. Uye zvakare, zvinotibvumidzawo kurekodha neye maikorofoni ye iPhone kuisa zvikamu zvekurondedzera. Huwandu hweshanduko uye mhedzisiro inosanganisirwa nechishandiso haina kushata kana, yakanakira kuita kuti vhidhiyo yedu ive inokwezva, kunyanya kana tawedzera akasiyana mavhidhiyo
Pakugadzirisa mavhidhiyo, iko kunyorera kunovachengeta nenzira yemapurojekiti, kuti tikwanise kusiya vhidhiyo uye tonhonga gare gare pasina dambudziko, kushanda panguva imwe chete pane akawanda mavhidhiyo pasina kupedzisa imwe kutanga inotevera.
Kupfuura zvese, Splice chirongwa zvachose, Uye kunyangwe iri yeGoPro, hazvidiwe kuti uve nekamera yekuishandisa, asi yakavhurika kune wese munhu. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kusavapo kwekubatanidzwa kwekutenga kana kushambadzira, saka kana iwe uri kufunga nezveimwe nzira yeMovie, pamwe ndiyo yakanakisa sarudzo yazvino mumusika muhombe uyo uri App Store iri pano chaipo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Splice, yepamberi vhidhiyo mupepeti pamutengo wakanakisa
Xiaomi inotangisa mumusika wedrone ... kuteedzera?